Filtrer les éléments par date : mardi, 06 juillet 2021
mardi, 06 juillet 2021 22:05
Fanadinam-panjakana CEPE 2021 : Vehivavy 46 taona ny zokiny indrindra amin’ireo mpiadina 546 365
Hotanterahina manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny tontolo andron’ny Talata 6 jolay 2021 ny fanadinam-panjakana CEPE.
Miisa 546 365 ny mpiadina manerana an’i Madagasikara izay mitsinjara amin’ny foibem-panadinana 1956 raha toa ka miisa 17 747 ny efitranom-panadinana. Niakatra 3% ny tahan’ny fitomboan’ny mpiadina raha oharina tamin’ny heritaona.
Amin’ireo mpiadina miisa 546 365 dia miisa folo fito amby (17) ny tsy mahita, enina (06) ny tsy dia mahita tsara, efa-polo valo amby (48 ) ny marenina, fito (07) ny sembana ara-batana raha toa ka iray (01) ny sembana ara-tsaina.
Efapolo eninamby (46) taona ny zokiny indrindra amin’ity fanadinana ity izay tsara ny manamarika fa mpiadina vehivavy avy any amin’ny Fari-piadidiam-pampianarana (CISCO) Fianarantsoa izy io.
mardi, 06 juillet 2021 08:58
mardi, 06 juillet 2021 08:51
mardi, 06 juillet 2021 08:04
Kitra – COSAFA CUP 2021 : Tsy hiazo an’i Afrika Atsimo i Madagasikara
Nanao fanambarana ny Federasiona malagasy ny baolina kitra fa tsy handray anjara amin’ny fifaninanana COSAFA CUP 2021 hatao atsy Afrika Atsimo i Madagasikara noho ny toe-draharaha ara-pahasalamana misy ao an-toerana.
mardi, 06 juillet 2021 07:55
Journée Start Up : Hanohanana sy hampahafantarana ireo tanora miantsehatra amin’ny fandraharahana
Tontosa ny tontolo andron'ity sabotsy 3 jolay ity tao an-drenivohitr'i Vakinankaratra ny hetsika, “Journée Start Up”, hetsika ara-toekarena hanohanana sy hampahafantarana ireo tanora miantsehatra amin’ny fandraharahana nokarakarain’ny FIVMPAMA Vakinankaratra.
Tanjona, raha ny nambaran’Atoa Razafiarison Andrianavalomanana, filohan’ny FIVMPAMA dia ny hanehoana sy ampahafantarana ireo tanora miantsehatra amin’ny fandraharahana ao Vakinankaratra, ahafahan’izy ireo mampahafantatra ny vokatra vokariny sy hifandraisany amin’ny mpiara-miombon’antoka ihany koa.
Nambaran’ny filohan’ny FIVMPAMA ihany fa ny tanjon’izy ireo dia ny fampirisihana ny tanora mba handraharaha aorian’ny fianarany, fa tsy ny hitady asa satria nambarany fa 400 000 isan-taona ny olona tokony hiantsehatra eo amin’ny asa, kanefa eto Madagasikara dia tsy misy ny asa, ka ireo tanora no entanina mba hamorona asa hiasan’ny hafa fa tsy ny hiasa aman’olona foana.
mardi, 06 juillet 2021 07:54
Antananarivo/ Brazzaville – L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) voudrait rappeler qu’il n’existe pas encore de traitement antiviral spécifique dont l’innocuité et l’efficacité soient prouvées pour le traitement de la COVID-19. Les corticostéroïdes et l'oxygène médical sont essentiels pour sauver la vie des patients gravement atteints par la COVID-19.